စားချင်တာမို့လားစားချင်တာမို့လား – မြန်မာသတင်းစုံ
Posted on December 23, 2020 Author admin	Comments Off on စားချင်တာမို့လားစားချင်တာမို့လား
တပ်တွင်း အစည်းအဝေး စောပြီးလို့ အားနေတဲ့ တစ်ရက် ဗကမျိုးစည်သူ ပျင်းလို့ ဖေ့ဘုတ် ဖွင့်ပြီး ဟိုပွတ် ဒီပွတ် လုပ်နေတယ်။ မျိုးစည်သူ က အရာရှိငယ် လူပျိုဆောင်မှာ နေတယ်။ အရာရှိဆိုတော့ သီးသန့် အခန်း ရတယ်လေ။ တပ်ရင်းမှူး နဲ့ အခြားအရာရှိတွေ တိုင်းမှူးလမ်းကြောင်း ပါသွားလို့ မျိုးစည်သူ သိပ်အလုပ်မရှိဘူး။ အရာရှိလူပျိုဆောင် ဟာ တိတ်ဆိတ်လို့။ နေ့ခင်းက စားဖိုမှူးလာပို့သွားတဲ့ ပဲဟင်းနဲ့ ငါးကြော်နှပ်ကိုတောင် ပျင်းလို့ မစားသေးဘူး။ ဗိုက်ကလည်း မဆာသေးဘူးကိုး။ ဘီယာသောက်ရအောင်လည်း နေ့ခင်းကြီးကို မျိုးစည်သူ မသောက်တတ်။ ပျင်းစရာကောင်းလှတဲ့ နေ့ခင်းပါလား။ ဖေ့ဘုတ် ပေါ်က မော်ဒယ်တွေကို လိုက်ပြီး ရွေးကြည့်နေလိုက်တယ်။ မော်ဒယ်တွေပုံကိုသာ ရှာရတာ နိုင်ငံရေး အကြောင်းတွေကို မနည်းရှောင်နေရတယ်။
မျိုးစည်သူ က တပ်မတော်သားပေမယ့် နိုင်ငံရေး အငြင်းအခုန်တွေကို ဝါသနာမပါ။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ စစ်သားအလုပ်မဟုတ်ဘူးလို့ သူက ယူဆထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ မိန်းမကိစ္စကြတော့ စစ်သားဖြစ်ဖြစ်၊ ဘာဖြစ်ဖြစ် အမျိုးသားအကျိုးစီးပွါးမို့လား။ မျိုးစည်သူမှာ အရင်က ရည်းစားရှိတယ်။ သိပ်ပြီးတော့ သူ့ကို တွယ်ကပ်ချုပ်ခြယ်လွန်းလို့ လမ်းခွဲလိုက်တယ်။ ဒီကောင်မလေး က သူ့ကို ချစ်တယ်လို့ မထင်ပါဘူး။ အရာရှိမို့ လိုချင်တာလို့ မျိုးစည်သူထင်တယ်။ ဟုတ်တယ်လေ။ သူနဲ့လည်း ပြတ်ပြီး သိပ်မကြာဘူး။ နောက်တစ်တပ်က အရာရှိ ဗက တစ်ယောက်နဲ့ ကြိုက်သွားပြန်ရော။ မလွမ်းလောက်ပါဘူး။ မျိုးစည်သူ ဖေ့ဘုတ် ကြည့်နေရင်း မထင်မှတ်တဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ တက်လာတယ်။ မက်ဆေ့ က နေတက်လာတာ။ မေလမွန် ဆိုပြီး တောင်ကနဲ တက်လာတာ လန့်တောင်သွားတယ်။
မေလှမွန် တဲ့ ဘယ်သူပါလိမ့်။ သူ့ သူငယ်ချင်း ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ အမကြီးတစ်ယောက်ပါ။ ဘယ်သူက စပြီး အပ် မိမှန်းတောင် မသိဘူး။ ဘာပို့ပါလိမ့် ကြည့်လိုက်ဦးမှ။ ဒီအရွယ် အမကြီးတွေ ပို့တာဆို ဆရာတော်ကြီးရဲ့ မေတ္တာစာ လူ ၇ ယောက်ကို ဖြန့်ဝေပါတို့ ဘာတို့ပဲ နေမှာပဲ။ “ဟင်” မျိုးစည်သူရုတ်တရက် ကြောင်သွားတယ်။ ပုံက အဲဒီအမကြီးပုံမှ အစစ်ပဲ။ ဒါပေမဲ့ အဝတ်မပါဘူး။ ဝတ်လစ်စလစ်နဲ့။ အမကြီး က ပုံထဲမှာ ရီဝေဝေ မျက်နှာနဲ့ ကင်မရာကို ကြည့်နေတယ်။ အသက်က အနည်းဆုံး ၄၅ လောက်ရှိပြီ။ အလှပြင်ထားသေးတယ်။ ခပ်တွဲတွဲ နုတ်ခမ်းထူထူမှာ ဆိုးဆေးပါးပါးခြယ်ထားတယ်။ မျက်နှာမှာ အရေးအကြောင်း နည်းနည်းရှိပေမယ့် ငယ်ငယ်က လှခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ အများကြီး ကျန်သေးတယ်။ ပါးစပ်လေးက ဟ သယောင် မဟ သယောင်နဲ့။
စွဲပြီး နုတ်ခမ်းကို စုပ်နမ်းချင်စရာ ပြီးတော့ နို့ကြီးတွေက အသက်။ ညိုညို လုံးလုံးထွားထွားကြီး။ နို့သီးခေါင်းညိုညိုကြီးတွေက ထောင်နေသယောင်။ အပျိုနို့ လိုတော့ ခပ်သေးသေးဘယ်ဟုတ်မလဲ။ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ဖြစ်ညှစ်ကိုင်ပြီး ငပဲကို အလယ်ကထည့် ညှောင့်လိုက်ရရင် အားပါးပါး။ ခါးကတော့ နည်းနည်းတုတ်ပြီး အရစ်လေးတွေ တွေ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ယောက် ဒီအရွယ် မှာ ဒီလောက် ကျန်တာ တော်တော်လှနေပြီပြောရမယ်။ ကဲ အဓိက ပစ္စည်းကြီးအကြောင်းလာပြီ။ အမွှေးတွေရိတ်ထားလို့ သေချာမြင်နေရတယ်။ သပြေသီးမှည့်ရောင် ဘက်ကို ပြေးတဲ့ ညိုမဲမဲ အကွဲကြောင်းကြီး။ နူတ်ခမ်းသားလေးတွေတော့ နည်းနည်းထူတယ်။ ခပ်ပြူးပြူး အစေ့လေးကို တွေ့တယ်။ ဟူး။ လက်နဲ့ နိူက်ချင်စရာ။
မျိုးစည်သူ ရဲ့ ပစ္စည်းကြီးဟာ ပုဆိုးထဲမှာ တစ်ယမ်းယမ်း နဲ့ ထောင်ထ လာပြီ။ ဘာပြန်ပြောရမှန်း မသိတာနဲ့ အဲဒီပုံကို အသည်းလေးပေးလိုက်တယ်။ ဟုတ်တယ်လေ။ ခင်ဗျားတို့ ချက်ဘောက် ထဲကို စော်ကြီးတစ်ပွေက ဝတ်လစ်စလစ် တကယ့် ဖူးပုံကြီး ရိုက်ပို့လာရင် ဘာလုပ်မလဲ။ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိဘူးမို့လား။ ပြီးတော့ စာတက်လာတယ်။ “ဟာ သွားပါပြီ မှားပို့တာ” “ရပါတယ် အမ။ မရှက်ပါနဲ့ ကျွန်တော် ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောပါဘူး” လို့ မျိုးစည်သူ ပြန်ပို့လိုက်တာ။ “ရှက်လိုက်တာ သေချင်တာပဲ ဗိုလ်ကြီးရယ်။ ကန်တော့နော်။ သူငယ်ချင်းမ တစ်ယောက်ကို လှမ်းစတာပါ။” အမကြီး မမေလှမွန် နဲ့ မျိုးစည်သူ ဟာ ဒီလိုပဲ ခင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်တော့ သူ့ကို ဗိုလ်ကြီးလို့ မခေါ်ဘဲ မောင်လေး လို့ ခေါ်တယ်။
မျိုးစည်သူလည်း သူ့ပုံတွေအောက်မှာ သွားပြီးတော့ မှတ်ချက်လေးတွေ ရေးတယ်။ ရယ်လည်းရယ်ချင်တယ်။ ဓမ္မစကူးလ်မှာ စာသင်ပေးနေတဲ့ ပုံလေးတွေတင်ထားရင် သူပို့လာတဲ့ သပြေရောင် အကွဲကြောင်းနဲ့ ဆက်ဆီပုံကို မြင်ပြီး ရယ်ချင်တာပဲ။ ပြောရဦးမယ်။ မျိုးစည်သူ က ဒီပုံကို ဆေ့ဗ်ထားတယ်။ လက်နဲ့ အာသာဖြေတိုင်း မမေလှမွန် ပုံကို ကြည့်ပြီး ဖီးယူရတာပဲ။ တစ်ရက် မျိုးစည်သူ အရဲစွန့်ပြီး စာပို့လိုက်တယ်။ “မမေ ကျွန်တော့်ကို ပုံလေးပို့ပါဦး” လို့။ သူက ပြန်ပို့တယ်။ “အမ အကောင့် မှာ အများကြီးတင်ထားတာလေ” “အဲဒါမဟုတ်ဘူးလေ ဟိုတခါပို့ထားတဲ့ ပုံမျိုးလေးပါ” “ဟာ ရှက်တယ်ကွာ။ မောင်လေး တော်တော်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ ဟုတ်လား” မျိုးစည်သူ ဘာပြောရမှန်းမသိဘူး။ “မင်း မမေ ကို ဘယ်လို သဘောထားတာလဲ။
မမေ ကို ချစ်လို့လား” “ဗျာ” “မဗျာ နဲ့ သိပါတယ်။ စားရုံပဲ စားချင်တာမို့လား။ မမေက လည်း ကိုယ့်ထက်အများကြီးငယ် တဲ့ သူနဲ့ တရားဝင် မတွဲပါဘူး မကြောက်ပါနဲ့” “အဲဒီလောက်ကြီး မဟုတ်ပါဘူး မမေ ရယ်။ ပုံလေးကြည့်ချင်လို့ပါ” “မသိဘူးကွာ။ မမေကို စားချင်ရုံ သက်သက်ပဲ စိတ်ထဲထားတဲ့ သူကို မပို့ပါရစေနဲ့။ တကယ်ချစ်ခင် တက်မက် တယ် သံယောဇဉ် ရှိတယ်ဆိုမှ စဉ်းစားမယ်။ မေ လည်း မောင်လေးကို သဘောကျပါတယ်” “ဗျာ ဟုတ်” အဲဒီနေ့ကတော့ ပုံမပို့ပေးဘူး။ ပိုပြီးတော့ ပွင့်လင်းသွားခဲ့တယ်။ မမေလှမွန် နဲ့ မျိုးစည်သူတို့ စကားတွေ ပြောနေရင်းနဲ့ ခင်သွားခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက် ပုံလေးတွေရော ဗီဒီယိုလေးတွေရော ရတော့တာပဲ။ မျိုးစည်သူ ဟာ မေလှမွန် ရဲ့ ပုံတွေကို ကြည့်တိုင်း ဘယ်တော့မှ မရိုးဘူး။ နို့ကြီးတွေကို အမြဲတမ်း စို့ချင်တယ်။
ပစ္စည်း ညိုညိုအာအာကြီးကိုလည်း ဘယ်လို ကလိုင်းချင်မှန်းမသိဘူး။ ဗီဒီယိုထဲမှာ မမေ က အမြဲတမ်း ကလိ ပြတယ်။ အားရှီးနဲ့ သူ့ညည်းသံလေးကို သိပ်သဘောကျတာပဲ။ တစ်ရက်တစ်ရက် အာသာဖြေတိုင်း မေလှမွန် ရဲ့ လိင်အင်္ဂါကလိပြတဲ့ ဗီဒီယိုကို အမြဲဖွင့်ကြည့်ရတယ်။ ဗီဒီယို ရဲ့ အစမှာ မမေလှမွန် ဟာ သူ့ရင်ဖုံးအင်္ကျီ ကို ဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်တယ်။ အင်္ကျီကို ဖွင့်တာ ၂ မိနစ်လောက် ကြာနေတော့ အားမလို အားမရတောင် ဖြစ်ဖြစ်လာတယ်။ ကြယ်သီးတွေကို တဗြုတ်ဗြုတ် ဖယ်လိုက်ပြီးနောက်မှာ ဘရာအနက်ရောင်ထဲက လျှံထွက်နေတဲ့ နို့ကြီး နှစ်မွှာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ ခေါင်းမည်းမည်းကြီး နဲ့ တုန်နေတဲ့ နို့ကို နယ်ပြနေတာ အားရစရာကြီး။ မမေ ဟာ နို့ကြီးကို နယ်နေရင်း အားမလို အားမရဖြစ်လာတယ် ထင်တယ်။ တအီးအီး နဲ့ ညည်းလာတယ်။
ဘရာဇီယာကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆွဲပြီး လွှင့်ပစ်လိုက်တယ်။ နို့ကို နယ်နေရင်းနဲ့ လုံချည်က လျော့ကျလာခဲ့တယ်။ လုံချည်အောက်မှာ အတွင်းခံဘောင်းဘီ အပြာလေးကို တွေ့နေရတယ်။ အပြာရောင် ဘောင်းဘီထဲကို လက်ထည့်ပြီး အပြင်ကနေ နိူက်ပြနေတယ်။ နောက်တော့ အားမရဖြစ်လာပြီး ဘောင်းဘီကို လုံးဝချွတ်ထုတ်လိုက်တယ်။ အားပါးပါး မျိုးစည်သူ သိပ်ကြိုက်တဲ့ သပြေရောင် အကွဲကြောင်းကြီး။ အရည်တွေကို ရွှဲစိနေတာပဲ။ ပေါင်ကို ဖြဲပြီး အစေ့ထိပ်ကို တဇိဇိ နဲ့ ပွတ်ပြတယ်။ အော်လိုက်တာလည်း စုံနေတာပဲ။ မျိုးစည်သူ နာမည်တောင်ပါသေးတယ်။ ၁၀ မိနစ်လောက် မျိုးစုံ ပွတ်ပြ၊ ချေပြရင်း သူလည်း ခြေကုန် လက်ပန်းကျပြီး ပြီးသွားတယ်။ ဒီဘက်မှာလည်း မျိုးစည်သူ တစ်ယောက်ပြီးပါပြီပေါ့။
မျိုးစည်သူနဲ့ မမေလှမွန် တို့ဟာ အွန်လိုင်းမှာ စကားပြောရင်း တကယ်နားလည်မှု ရလာကြတယ်။ ဆိုက်ဘာ စုံတွဲပေါ့။ ရည်းစားလည်းမဟုတ်ဘူး။ မိတ်ဆွေ စုံတွဲပေါ့လေ။ တစ်ရက် မမေလှမွန် က ထူးထူးခြားခြားပြောလာတယ်။ “မောင်လေး မမေ နဲ့ မတွေ့ချင်ဘူးလား” “ဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲအမရယ်။ ကျွန်တော့်မှာ နေ့တိုင်း အမကို ရော်ရမ်းမှန်းဆနေရတာပါ ဟီးဟီး” “အေး မမေ လည်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ မောင်လေး တာဝန်ကျတဲ့ မြို့ကို ဘုရားဖူးလာမလို့” “ဗျာ မမေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဟာကို ဘယ်လိုတွေ့ရမတုန်း” “မင်းတွေ့ချင်သလားသာ ပြောပါ။ သူတို့ ဘုရားသွားဖူးတဲ့ တစ်ရက် နားချင်တယ်ဆိုပြီး ဟိုတယ်မှာ နေခဲ့မှာပေါ့” “မမေ တကယ်ပြောတာနော်” မမေလှမွန် က အင်းလို့ တစ်ခွန်းတည်းပြောတယ်။ ဗကမျိုးစည်သူ ရင်တွေတောင် တဒိုင်းဒိုင်း ခုန်တယ်။
ဟယ်လို “ဟုတ်ကဲ့ မေလှမွန် ပါရှင့်” “မမေ ကျွန်တော်ပါ။ မျိုးစည်သူ ပါ မ ရဲ့။ ကျွန်တော် ဟိုတယ်အောက်ကို ရောက်နေပြီ” “ဟာဗိုလ်ကြီး ရောက်နေပြီလား။ မ က ရေတောင် မချိုးရသေးဘူး။ အောက်နားကဆိုင်မှာပဲ ဘီယာပုလင်း နည်းနည်းလောက်ဝယ်ခဲ့ပါလား။ မ ဟိုတယ်ကနေ စားစရာ မှာထားမယ်။ တူးအိုဖိုး ကို တက်ခဲ့ ချစ်ရေ” “ဟုတ် ဟုတ်” မျိုးစည်သူ က ဟိုတယ်အောက်နားက ပုလင်းဆိုင်ကနေ ဘီယာ လေးပုလင်း ဝယ်လိုက်တယ်။ လိုလိုမယ်မယ် အာလူးကြော်ထုတ်တွေပါ ဝယ်လိုက်သေးတယ်။ ဟိုတယ် ဧည့်ကြိုကို တူးအိုဖိုး သွားချင်လို့ ဆိုပြီး ပြောလိုက်တော့ ကောင်မလေး က အခန်းကို ဖုန်းလှမ်းဆက် တယ်။ “ဟုတ်ကဲ့ တက်ခဲ့ပါတဲ့ ဆရာ” မျိုးစည်သူ တစ်ချက် ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်ပြီး အပေါ်ထပ်ကို လှေကားအတိုင်းပဲ တက်သွားလိုက်တယ်။
တူအိုဖိုး ရှေ့ရောက်တော့ တံခါးခေါက်လိုက်တယ်။ “မ ရေ မ မ” တံခါးပွင့်သွားတယ်။ “ကဲ ရောက်လာပြီပေါ့လေ။ ဝင်ပါရှင်” “မ သူငယ်ချင်းတွေရော” “ရေတံခွန်သွားမယ်လို့ ပြောတယ်။ ဟိုမှာ ညအိပ်လိမ့်မယ်။ အေးအေးဆေးဆေးပဲ” တကယ်တမ်းတွေ့ကြတော့ ဘာက စပြောရမှန်းမသိ။ မမေလှမွန်က ဘီယာပုလင်းတစ်ပုလင်းကို ဖောက်လိုက်ပြီး ကျန်ပုလင်းတွေကို ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်လိုက်တယ်။ နှစ်ယောက်တူတူ ဘီယာသောက်နေရင်း နဲ့ သူ့မြို့ ကိုယ့်မြို့အကြောင်းတွေ ပြောနေကြတယ်။ စိတ်ထဲမှာတော့ သိတယ်မဟုတ်လား။ မျိုးစည်သူ က လုပ်ငန်းစချင်နေပေမယ့် မစ သေးဘူး။ အပြင်မှာပါ စကားစမြည် ရင်းနှီးသွားဖို့ လိုတယ်လေ။ ဘီယာသောက်ရင်းနဲ့ မျိုးစည်သူက မမေလှမွန် ရဲ့ လက်ကလေးကို အုပ်ပြီး ကိုင်လိုက်တယ်။ မေလှမွန်ပြုံးနေတယ်။
“ဘယ်လိုလဲ အပြင်မှာ မလှလို့ စိတ်ပျက်သွားပြီလား” “ဟာ မဟုတ်ပါဘူး။ လှပါတယ် မရဲ့” မျိုးစည်သူ နဲ့ မမေလှမွန်တို့က ယှဉ်ပြီးထိုင်နေကြတာလေ။ မျိုးစည်သူ က မမေလှမွန် ရဲ့ ပုခုံးကို ဖက်ပြီး သူ့ရင်ထဲ ဆွဲသွင်းလိုက်တော့ မမကြီးက အလိုက်သင့်ပါလာတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဘီယာတစ်ပုလင်း ကုန်သွားခဲ့တယ်။ မျိုးစည်သူ က မေလှမွန်ရဲ့ နဖူးလေးကို နမ်းလိုက်တယ်။ လက်ကျန် သနပ်ခါး နံ့လေးနဲ့ ချွေးနံ့လေးပေါင်းပြီးရတယ်။ “ခေါင်းမလျှော်ရသေးဘူး ချစ်ရဲ့” “ရပါတယ်မ ရယ်။ မ ကိုပဲ နမ်းချင်တာပါ” ဗီဒီယိုထဲမှာပဲ လိင်ကိစ္စတွေ ပြောနေကြရာကနေ ခု အပြင်မှာ ပထမဆုံး ချစ်ကြပြီပေါ့။ မျိုးစည်သူ ဟာ မမေလှမွန်ရဲ့ မေးဖျားကို ဆက်ခနဲမလိုက်ပြီး ပါးကြီးကို နမ်းလိုက်တယ်။ မေလှမွန်ကလည်း သူ့ကို ပြန်နမ်းပါတယ်။ သူတို့ တမင်ကို နူတ်ခမ်းကို ရှောင်နမ်းနေကြတယ်။
နူတ်ခမ်းအနမ်းက ပြီးမှလေ။ ကြာတော့ မနေနိုင်တော့ဘူး။ မမကြီးရဲ့ ပါးနှစ်ဖက်ကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်တော့ နူတ်ခမ်းလေးက ထော်လာတယ်။ မျိုးစည်သူက အပေါ်နူတ်ခမ်းကို ငုံပြီးတော့ စုပ်ပစ်လိုက်တယ်။ မမေလှမွန် က ချက်ခြင်းပြန်မနမ်းသေးဘူး အလိုက်သင့်လေး ငြိမ်ခံနေတယ်။ မျိုးစည်သူ က အပေါ်နူတ်ခမ်းကို စုပ်လိုက်၊ သူ့လျှာနဲ့ ထိုးလိုက် အကြာကြီး လုပ်နေမှ တုန့်ပြန်မှုတွေ ပြန်ရောက်လာတယ်။ လာမယ့်လာတော့လည်း မြန်လိုက်တာ။ မေလှမွန်ရဲ့ လျှာနုနု လုံးလုံးကြီးက သူ့ပါးစပ်ထဲကို ရောက်လာတယ်။ လျှာလျှာခြင်း နမ်းကြတာ ဆိုတာ လျှာခြင်းပဲ ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွားကြသလိုလို။ “လျှာလေးထုတ်ပေးပါ မရယ်။ မောင် စုပ်ချင်လို့” မေလှမွန်က ငြိမ်နေပေးတယ်။ သူ့လျှာကြီးကို မျိုးစည်သူဟာ တက်တက်မက်မက် စုပ်လိုက်တယ်။
မေလှမွန် ရဲ့ ဖက်ထားတဲ့ လက်တွေက ပိုပြီးတော့ တင်းကျပ်လာတယ်။ သူ့ရဲ့ အိမ်နေရင်း ဂါဝန် ရင်ညွှန့်ကြားထဲကနေ လက်ထည့်လိုက်တယ်။ သူအမြဲကိုင်ကြည့်ချင်ခဲ့တဲ့ နို့ကြီးတွေပါလား။ “အိပ်ရာပေါ် သွားရအောင် ကလေးရယ်” တဲ့။ မျိုးစည်သူ ဟာ မမေလှမွန် ကို လက်က ဆွဲလာပြီး အိပ်ရာပေါ် ဆွဲလှဲချလိုက်တယ်။ မရသေးဘူး နူတ်ခမ်းတွေကို ပြန်နမ်းတော့တာပဲ။ ဒီတစ်ခါတော့ အနမ်းတွေက တော်တော်ကြမ်းလာပြီ။ နမ်းရင်းနဲ့ မမေလှမွန် က သူ့အပေါ်ကို ပြန်ရောက်လာတယ်။ အပေါ်ကနေ ကစ်စ်ပေးနေတာ အားရပါးရ။ မမေလှမွန် က မျိုးစည်သူရဲ့ ရှပ်အင်္ကျီ ကြယ်သီးတွေကို တစ်လုံးချင်း လိုက်ဖြုတ်တယ်။ မျိုးစည်သူဟာ ခုဆိုရင် အပေါ်ပိုင်း ဗလာကျင်းနဲ့။ စစ်သားဆိုတော့ အဆီပိုမရှိ၊ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်နဲ့။ မမေလှမွန် ရဲ့ ဂါဝန်ကြီးကို ပင့်ပြီး ဆွဲချွတ်လိုက်တယ်။
ဒါပေမဲ့ မကျွတ်ပါဘူး။ “ပေးပေး မ ဖာသာ ချွတ်လိုက်မယ်” တဲ့။ အားပါးပါး အမြဲတမ်းမြင်ပြီး လိင်အာသာဖြေခဲ့ရတဲ့ နို့ကြီးကို အပြင်မှာ တွေ့နေရပါလား။ “ဟာ မင်းကလည်း ခုလိုကြီး မကြည့်နဲ့ကွာ မ ရှက်တယ်” “ကြည့်နေကျပဲဟာ မ ကလဲ” “မတူဘူးကွ။ ခုဟာက အပြင်မှာ ဖြစ်နေပြီ” ကိုယ်လုံးတီးနဲ့ ဖြစ်သွားတဲ့အခါ ဖက်ရတာပိုပြီး ကောင်းလာတယ်။ ဒါကြောင့် လူတွေဟာ လိင်ဆက်ဆံရင် တစ်ကိုယ်လုံး ချွတ်ကြတာပါ။ ဖက်ထားပြီး ပြန်နမ်းကြတယ်။ နူတ်ခမ်းက မလွှတ်တမ်းခဲထားပြီး နမ်းနေရင်း လက်တွေကလည်း မမေလှမွန်ရဲ့ နို့ကြီး၂ လုံးကို အားပါးတရ ချေနေမိတယ်။ ညည်းသံလေးတွေ သဲ့သဲ့ကြားရတယ်။ မမေလှမွန်ဟာ တဖြည်းဖြည်း ထန်လာပြီးတော့ မျိုးစည်သူရဲ့ ဘောင်းဘီ အပြင်ဘက်ကနေ မာတောင်နေတဲ့ ပစ္စည်းကြီးကို ပွတ်ပေးနေတယ်။
နူတ်ခမ်းချင်း စုပ်ပြီး နမ်းနေတာပဲကို မိနစ် ၂၀ လောက် ကြာသွားတယ်။ “ကဲ ကလေး မင်းဘောင်းဘီကို ချွတ်လိုက်တော့ မ လည်း မရှက်တော့ဘူး။ တော်တော်ထန်လာပြီ” ဟာ -ီး ထီပေါက်တယ်ဆိုတာ ဒါကို ပြောတာပဲ။ မျိုးစည်သူဟာ မိမွေးတိုင်း ဖမွေးတိုင်း အနေအထားအတိုင်း ဖြစ်သွားအောင် ဘောင်းဘီ၂ ထပ်လုံးကို ချွတ်လိုက်တယ်။ ရှယ်ကိုယ်လုံးကြီးနဲ့ မမေလှမွန်ဟာ အောက်ကို ကုန်းဆင်းသွားပြီး မာနေတဲ့ မျိုးစည်သူရဲ့ လိင်တံကြီး ထိပ်ကို ငုံထားလိုက်တယ်။ ပါးစပ်ထဲမှာ ငုံထားပြီးတော့ လျှာနဲ့ လိုက်လျက်နေတယ်။ “ကန်တော့နော် မမေ” မမေက ဘာမှ ပြန်မပြောဘူး။ ထိပ်ဖျားကို ငုံထားရာကနေ အားရပါးရ စုပ်ထည့်လိုက်တယ်။ ဝါရင့်တာ သိသာတယ်။ ဒီလောက် ပါးစပ်ထဲထည့် စုပ်နေတာ လုံးဝ သွားနဲ့ မကိုက်မိဘူး။
ကျင်ကနဲ နေအောင် ဘယ်လောက် ကောင်းသွားတယ်ဆိုတာ အစုပ်ခံဖူးတဲ့ ငနဲတိုင်း သိပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မမေလှမွန်ဟာ ခပ်မြန်မြန်လေးစုပ်တယ်။ စုပ်ပြီးတော့ ပစ္စည်းနဲ့ ပတ်လည်ကို လျှာနဲ့ လိုက်လျက်နေတာ အားရစရာ ကောင်းတယ်။ မျိုးစည်သူနဲ့ ပစ္စည်းတောင့်ကြီးကို ကိုင်လိုက်ပြီးတော့ ဥတွေကိုရော ဖင်ကြားတွေကိုရော လိုက်လျက်တာပဲ။ မျိုးစည်သူ ဟာ တအားအား စုပ်တသပ်သပ် နဲ့ ဖြစ်နေတယ်။ “မ ရယ်။ နားလိုက်ဦး နို့မို့ဆို မလုပ်ရဘဲနဲ့ ပြီးသွားတော့မယ်” ရော့ အမောပြေဆိုပြီး ပါးကြီးနှစ်ဖက်ကို နမ်းလိုက်တယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ ခိုးစားနေကြသူတွေနဲ့ မတူတော့ဘဲ ချစ်သူ နှစ်ဦးလိုလို။ နို့စို့မယ်နော် မ ဆိုပြီး မျိုးစည်သူက နို့ကြီးနှစ်လုံးကို အားပါးတရာ ကြည့်နေမိတယ်။ နို့သီးထိပ် အတောင့်လိုက်ကြီးတွေကို အားရပါးရ စို့တော့တာပဲ။
သူမနေနိုင်တော့ဘူး။ တစ်ဖက်ကို ဖြစ်ညှပ်စထားပြီး တစ်ဖက်ကို စို့နေတာ။ မမေလှမွန် ဟာ တအီးအီး တအားအား နဲ့ အော်တယ်။ အော်တာ မှ တကယ့်ကို အော်တာနော်။ ညည်းနေတာမဟုတ်ဘူး။ ဟိုတယ်ခန်း အပြင်က ကြားမှာတောင် ကြောက်ရတယ်။ “အား မောင်လေးရယ်။ ကလေးရယ်။ ကောင်းလိုက်တာ။ အား ကောင်းလိုက်တာ။ ကြမ်းကြမ်းလေး စို့ပါကွာ မင်းကလည်း အား အား အား အား။ အမေလေး အား ရှီး ရှီး” နို့ကြီးတွေဟာ ကြီးပေမယ့် ပျော့တွဲတွဲကြီးတွေမဟုတ်ဘူး။ နို့စို့လို့ ကောင်းလိုက်တာ။ မျိုးစည်သူ မနေနိုင်တော့ဘူး။ အမြဲတမ်းတွေ့နေကျ သပြေရောင် အဖုတ်အကွဲကြောင်းကြီးကို လျှာနဲ့ လျက်တော့မယ်။ မျိုးစည်သူ တဖြည်းဖြည်း အောက်ဆင်းသွားတော့ မမေလှမွန်က အလိုက်တသိ ပေါင်ကို ကားပေးတယ်။
အားပါးပါး ပစ္စည်းကြီးက အွန်လိုင်းမှာတွေ့ခဲ့တုန်းကအတိုင်းပဲ လှလိုက်တာ။ အမွှေးတွေလည်း ရိတ်ထားတယ်။ မျိုးစည်သူ ဟာ အရည်တွေရွှဲနေတဲ့ ဟာကြီးကို မရွံနိုင်တော့ဘူး။ သူလည်း တအားထန်နေပြီလေ။ အားရပါးရ လျက်ချလိုက်တယ်။ လက်မနှက်ဖက်နဲ့ ဖြဲထားပြီးတော့ ပြူးထွက်လာတဲ့ အစေ့ကို ကစ်ဆင် ပေးတာ။ လျှာနဲ့ လည်း အပေါ်အောက် ပွတ်ချပေးတယ်။ မမေလှမွန်လား။ ဖီးတက်တာမှ ဖင်ကြီးနှစ်လုံးကို တုန်နေတာပဲ။ တုန်တက်နေတာ။ “မောင်လေးရယ် တော်လိုက်တာ တော်လိုက်တာ” နဲ့ပဲ ပြောနေတယ်။ လက်ခလယ်နဲ့ အဖုတ်ခေါင်းကြီးထဲကို ထိုးထည့်ရင်း လျှာနဲ့ လည်း ထိပ်ဖျားကို စုပ်ပေးနေတော့ မမေလှမွန်မှာ ဘာတွေ အော်မိလို့ အော်မိမှန်းကို မသိတော့ဘူး။ တရှီးရှီး တရှားရှားနဲ့။ ကဲ လုပ်ငန်းစတော့မယ် ။
လှေကြီးထိုး ရိုးရိုးပဲလေ။ အပေါ်ကနေ ပစ္စည်းကို အရင်းကနေကိုင်ပြီး မမေလှမွန် ရဲ့ အဖုတ်ရည် ရွှဲရွှဲကြီးကို တေ့လိုက်တယ်။ “ဖြည်းဖြည်းထည့်နော် ကလေး။ မ က မလုပ်တာ ကြာပြီ” လို့ ပြောတယ်။ ဇိကနဲ ဖြည်းဖြည်းချင်း ထိုးထည့်လိုက်တယ်။ ပထမပိုင်းတော့ ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲ ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်တာပေါ့။ မမေလှဟာ မျက်လုံးလေး မှေးလို့ တိုးတိုးလေး ညည်းရင်းခံနေတယ်။ ခဏနေတော့ သူလည်း ဖီးတက်လာပုံရတယ်။ အောက်ကနေ ပြန်ဆောင့်ပေးနေတယ်။ ပစ္စည်းကြီးနှစ်ခုလုံးဟာ တဏှာရည်တွေ ထန်နေတာမို့ တဗွက်ဗွက်နဲ့ အသံတွေ မြည်နေတဲ့။ မမေလှမွန် က အော်လိုက်၊ မျိုးစည်သူက ညည်းလိုက်နဲ့ တကယ့်အားရစရာကြီးပေါ့။ “မ လေးဘက်ထောက်ပေးပါလား” ခေါင်းငြိမ့်ရင်း လေးဘက်ထောက်ပေးတယ်။ ဖင်လုံးကြီးဟာ ကော့နေတာပဲ။
ဖင်ကြီးကို ကိုင်ပြီး လုပ်ရတာလည်း တမျိုးကောင်းတာပဲ။ “မောင်လေးရေ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးနဲ့ မြန်မြန်လေးလုပ်လိုက် ပြိုင်တူပြီးရအောင် မမ ပြီးတော့မယ်” မျိုးစည်သူလည်း စိတ်ကို လွှတ်ပေးလိုက်တယ်။ တဒိုင်းဒိုင်းနဲ့ ဆက်တိုက် အချက်နှစ်ဆယ်လောက် ဆောင့်ပေးလိုက်တယ်။ သူ့တကိုယ်လုံးက အကြောတွေ တုန်ယီပြီး ပြီးသွားတယ်။ သုတ်ရည်တွေလည်း ဘယ်လောက်တောင်ပန်းထွက်သွားတယ်မသိဘူး။ “ဆွဲမထုတ်နဲ့ဦး မောင်လေးရယ်။ မ ကို ဖက်ထားပေးပါ” တဲ့ ပြောတယ်။ နောက်ကနေ ပစ္စည်းကို ထည့်ထားပြီး ခါးကနေ ဖက်ထားပေးတယ်။ မမေလှမွန်က ခေါင်းကို လှည့်ပြီး မျိုးစည်သူနဲ့ မေးဖျားကို ကြင်ကြင်နာနာလေး နမ်းလိုက်တယ်။ “တော်လွန်းလို့ ဆုချတာနော် ကောင်လေး” တဲ့ …… ပြီးပါပြီ။
အော် ငါ့အသက်အရွယ်က ဆယ့်ရှစ်နှစ်ကျော်လို့ ဆယ့်ကိုးနှစ်တောင် ရောက်နေပြီပဲ… ကလေးလေး ဘဝနဲ့ ဖေဖေ မေမေ တို့ရဲ့ ရင်ခွင်ထဲမှာပဲ ခိုအောင်းပြီး အေးချမ်းပျော်ရွှင်ခဲ့တာ ဖေဖေနဲ့ မေမေကလဲ ငါ့ကို ကလေးလေး တစ်ယောက်လိုပဲ အခုထိ ထင်နေတုန်းပဲ…ဖေနဲ့ မေရယ် သမီးကလေးမဟုတ်တော့ဘူး သမီးလေ လောကကြီးကို တစ်ယောက်ထဲ ပျံသန်းကြည့်ချင်နေပီ…. ငါ့ရဲ့ သူငယ်ချင်း ဖူးပွင့်ဝေနဲ့ သင်ဇာအောင် လို ရည်းစားလေး ထားကြည့်ချင်လိုက်တာ…. တော်တော် ပျော်စရာ ကောင်းပြီး မခံစားဘူးတာတွေကို ခံစားရမှာပဲ…. အချစ်ရဲ့ အရသာကို ရင်ခုန်ကြည့်ချင်လိုက်တာ…. နက်ဖြန်ဆို ငါ့မွေးနေ့ ပဲ စောစောအိပ်မှ….. မနက်အစောကြီးထ ရေမိုးချိုးပြီးတော့ …. မေမေ သမီး ဖူးပွင့်တို့ဆီ သွားလိုက်ဦးမယ်…. သူတို့ အဆောင်လဲရောက်ရော …. […]
ကျွန်နော်ရဲ့တကယ်အဖြစ်ပျက်လေးပါ။မှတ်မိသလောက်နဲ့ ရေးတက်သလောက်ရေးတာမို့ အဆင်မပြေရင် ဆောရီး ကျနော်အိမ်ထောင်ကျတော့ ဆယ့်ရှစ်နှစ်အရွယ်လောက်ပဲရှိဦးမယ်၊မိန်းမနဲ့လဲအသက်အတူတူ….. ကျန်နော်လူပျိုဘဝတုံးကရည်းစား သုံးလေးယောက်လောက်ရှိတော့၊အားလုံးကိုလည်း လှည်ပတ်ကြိတ်ပါတယ်။ အဲဒီအထဲကပုပုသေးသေးနဲ့ဖင်ကောက်ပြီးအိုးကြီးတဲ့.စော်လေးကိုအကြိတ်လွန်ပြီးကုန်းထောက် ဗိုက်ကြီး လို့ယူလိုက်ရတယ်။
ပါးလှလှ ညအိပျဝတျစုံလေးနဲ့ အသညျးယားအောငျ ဖမျးစားထားတဲ့ နနျးမှစေံ့ ရဲ့ ဗီဒီယို